Shaxda Ay Man United Kala Hortagi Karto Chelsea Iyadoo
Manchester United ayaa u socota garoonka qaranka Ingariiska Wembley Axada iyagoo la balansan kooxda Chelsea islamarkaana u dagaalamaya inay buukintaan finalka FA Cup.
Kooxda Red Devils ayaa kulankaan ciyaareysa iyagoo aan laga badinin 19 kulan oo isku xigta xilli ciyaareedkan.
Si kastaba, Ole Gunnar Solskjaer ayaa wajahaya shaqo adag isagoo isku diyaarinaya inuu xusho kooxdii uu kala hortagi lahaa Blues ka dib guushii 2-0 ee ay ka gaareen Crystal Palace xalay.
Meesha ugu adag ee uu xal u raadinayo waa booska daafaca bidix.
Luke Shaw iyo Brandon William ayaa labaduba awoodi waayay inay dhameystaan Is-aaragii ay Isniintii la soo dhaafay barbaraha la galeen Southampton ka dib dhaawacyo soo gaaray.
Shaw ayaa ku baxay dhaawac ka soo gaaray canqowga halka xiddigii bedelay Williams uu isna dhaawacmay waqtigii dhimashada ciyaarta, ilbiriqsiyo ka hor goolkii barbaraha ee Southampton.
Labada xiddig qeyb kama aysan aheyn kooxdii United ee xalay wajahday Crystal Palace sababo la xiriira dhaawacooda.
Timothy Fosu-Mensah ayaa lagu soo bilaabay kulankiisii ugu horeysay ee muddo seddex sannadood ah isagoo buuxiyay booska daafaca bidix ee Is-aaragii xalay.
Solskjaer ayaa amaanay xiddiga reer Holland ka dib qaab ciyaareed fiican uu soo bandhigay.
Shaw ayay u badan tahay inuu dhaawac sii ahaan doono kulanka Chelsea isagoo weli ka bararsan canqowga.
Si kastaba, dhaawacii isha ee soo gaaray Williams ayaa la filayaa inuu ka bogsado ka hor kulanka Blues, waxaana macquul ah inuu shaxda ku soo laabto.
Isbuucyadii ugu danbeysay Solskjaer ayaa soo safayay shax isku mid ah ilaa iyo xalay isagoo fursad siiyay Scott McTominay.
Laakiin xiddiga reer Scotland waxaa bedelay Nemanja Matic ciyaarta oo 30 daqiiqo ay ka harsan tahay taasoo la micno ah in Matic uu ku soo bilaaban doono kulanka ay ka horimaanayaan kooxdiisa hore.
Qaab-Ciyaareedka inteeda kale isbedel lagama filayo, goolka waxaa ku soo bilaaban doona De Gea inkastoo kulamada FA Cup uu ciyaarayay Romero laakiin madaama semi-final la joogo waxaa la filayaa in Solskjaer uu goolhayihiisa koowaad soo safo.
Daafaca waxay ka koobnaan doonaa Williams, Maguire, Lindelof iyo Wan-Bissaka. Khadka dhexe Matic ayaa soo laaban doona oo ka garab ciyaari doona Pogba halka Bruno Fernandes, Rashford iyo Greenwood ay ka danbeyn doonaan Anthony Martial.